Theo Walcott oo meesha ka saaray hadal dhawaanahan soo baxayey oo sheegayey inuu ka tagayo kooxda Gunners ka. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Theo Walcott oo meesha ka saaray hadal dhawaanahan soo baxayey oo sheegayey inuu ka tagayo kooxda Gunners ka.
Theo Walcott oo meesha ka saaray hadal dhawaanahan soo baxayey oo sheegayey inuu ka tagayo kooxda Gunners ka.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 2:05 PM Walcott ayaa sheegay in uusan damacsaneyn inuu ka tago kooxdiisa Arsenal, wuxuuna sheegay in ka tegitaankiisa Arsenal uusan ku xirneyn haddii uu gooldhaliye Jamie Vardy yimaado kooxda ka dhisan FLY Emirates Stadium iyo haddii kale.
Garabka duula ee Gunners Walcott ayaa lala xiriirinaayey inuu ka huleeli doono kooxda ka dhisan Emirates Stadium xagaagaan iyadoo lagu soo waramayey inay West Ham United ka mid tahay kooxaha doonaya inay kusii hayaan horyaalka England Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay shabakadda ESPN, Walcott ma doonayo inuu ka tago Gunners wuxuuna doonayaa inuu u dagaalamo booskiisa isla markaana uu tuso tababare Arsene Wenger inuu u qalmo inuu boos joogto ah ka helo qorshihiisa xilli ciyaareedka soo aadan 2016 illaa 2017.
Weeraryahankii hore ee kooxda Southampton ayaa laga reebay xulka qaranka England ee ciyaaraha Euro 2016 ka dib markii uu waayey booskiisa Arsenal qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii dhammaaday 2015 illaa 2016.